VaCharamba Vanoti MDC-T Haisi Kuda Mapurisa Kana Ichiita Misangano Yayo
Mbudzi 08, 2011
Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, uye vachitaura vakamirira mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, VaGeorge Charamba, vanoti VaMugabe vakaudza mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, kuti chimwe chakapa kuti mapurisa asakwanise kudzivirira vatsigiri vavo kuti vasarohwe kuChitungwiza neSvondo nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZanu-PF, inyaya yekuti MDC yakati haidi mapurisa pamisangano yayo.
VaCharamba vanoti nekuda kweizvi, maoko emukuru wemapurisa, VaAugustine Chihuri, akasungwa. Asi veMDC-T vanoti mashoko aVaMugabe ndeemugotsi matsuro.
MDC-T inoti vatsigiri veZanu-PF, vachitungamirirwa negurukota rezvevechidiki, VaGeroge Kasukuwere, pamwe nasachigaro wevechidiki muZanu-PF muHarare, naVaJim Kunaka, avo vanonzi vanotungamira Chipangano, ndivo vakaita kuti kuChitungwiza kuite mhirizhona yakapa kuti MDC itadze kuita musangano wayo.
Asi VaKunaka vanoti vakange vasiri pamusangano uyu.
VaCharamba vanoti vatungamiri vatatu vemapato ari muhurumende yemubatanidzwa vakatenderana kuti paitwe musangano pakati peCentral Committee yeZanu-PF uye maNational Executive emapato eMDC ari maviri kuti vazeye nyaya yemhirizhonga iyi.
Munyori anoona nezvekurongwa kwemabasa muMDC-T, VaNelson Chamisa, vanoti veZanu-PF vari kunyepa kuti vakarambidza mapurisa kuuya kumusangano.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, VaPedzisayi Ruhanya, avo vari kuita zvidzidzo zvepamusoro soro paWestiminster University kuBritain, vanotiwo Zanu-PF iri kutya kuti VaTsvangirai vatsvage rutsigiro sezvo VaMugabe vari kutadza kuita misangano sezvo vachigara vari kuchipatara.